မိသားစုဓါတ်ပုံလေးကိုကိုင်ပြီး ငိုနေတဲ့ ကိုရင်လေးရဲ့အဖြစ်
January 20, 2022 sonsonlinlin 0
မိသားစုဓါတ်ပုံလေးကိုကိုင်ပြီး ငိုနေတဲ့ ကိုရင်လေးရဲ့အဖြစ် လွမ်းတယ် အမေ နဖူးလေးစမ်းပြီးအပူတိုင်းတတ်တဲ့ အမေ့ ရဲ့လက်တစ်စုံကို လွမ်းတယ် ဘာစားချင်လည်းလို့ခဏခဏ မေးတဲ့ အမေ့ ရဲ့စကားသံလေးလေးကို လွမ်းတယ် လေစိမ်းတွေ ထွက်မခံပါနဲ့ဆိုတဲ့ အမေ့ ရဲ့သတိပေးသံလေးကိုလည်း လွမ်းတယ် ပူပူနွေးနွေးနဲ့အမေ့ လက်ရာဆန်ပြုတ်တစ်ခွက်ကိုလည်း လွမ်းတယ် ငယ်ဘဝ ငယ်ညတွေက အမေ နဲ့ပတ်သက်သမျှ အရာအားလုံးကိုလွမ်းတယ် အမေ အခုတော့ အမေ —— ဝေးတစ်မြေ နယ်တစ်ခြားက စာသင်သားတစ်ယောက်ဘဝရဲ့ အဖြစ်ကို […]
သေနေ့မစေ့သေးသောနေ့(သို့မဟုတ်) သေကံမပါသေးသော … ည
သေနေ့မစေ့သေးသောနေ့(သို့မဟုတ်) သေကံမပါသေးသော … ည စာဖတ်သူတို့အတွက် စေတနာနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပီနော် သေနေ့မစေ့သေးသောနေ့(သို့မဟုတ်)သေကံမပါသေးသော ည…အိမ်ကိုညနေခြောက်နာရီခွဲလောက်မှ ပြန်ရောက်တော့ အမျိုးသားက ညစာစားဖို့ဟင်းနွှေး ဘာညာ သူပြင်လိုက်မယ်ဆိုပီး အောက်ထပ်မှာ ပြင်ဆင်နေခဲ့တယ်။ ကျမတို့အိမ်က အပေါ်ထပ်နဲ့ အောက်ထပ် အတော်လေးအော်ပြောမှ ကြားနိုင်တာပါ….သမီးလေးနဲ့ ကျမ အိမ်အပေါ်တက်လာခဲ့ပီး ကျမလုပ်စရာလေးရှိလို့သမီးလေးကို တီဗီ ဖွင့်ပေးပီး….လုပ်စရာရှိတာလေးလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ သမီးလေးကတော့ အိပ်ရာပေါ်မှာ ဆော့ရင်းကစားရင်း သူစိတ်ဝင်စားတဲ့သီချင်းလေးတွေလာရင် တီဗီငေးရင်းပေါ့…. သမီးလေးက အိပ်ရင် ဟိုကျော်ဒီခွအိပ်တတ်လို့ကုတင်ကိုဖြုတ်ပီး သံမံတလင်းမှာ […]
ကာဘော်လစ် ဆပ်ပြာ အသုံးပြုနေသူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ သတိပြုဖွယ် အချက်
ကာဘော်လစ် ဆပ်ပြာ အသုံးပြုနေသူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ သတိပြုဖွယ် အချက် ကာဘော်လစ် နှင့် မျက်နှာသစ်ဖြစ်နေသူများအတွက် သတိပြုဖွယ် အပီအပြင် ငြင်းနေကြလို့ ချက်ကျ လက်ကျပဲပြောပါမယ် ကာဘော်လစ် ဆပ်ပြာကို မျက်နှာလုံးဝမတိုက်ပါနဲ့ ကိုယ့်မျက်နှာအသားရည် ကိုယ်တန်ဖိုး ထားရင်ပေါ့ တိုက်နေတဲ့သူတွေလဲ လာမငြင်းပါနဲ့ဆက်တိုက်ပါ ကာဘော်လစ်ဆပ်ပြာမှာ ကာဘော်လစ်အက်စစ်ပါဝင်တဲ့အတွက်မျက်နှာအသားရည်ကိုပျက်ဆီးစေရုံသာမက မျက်ကြည်လွှာထိခိုက်စေပါတယ် carbolic အက်စစ်က နုနယ်တဲ့မျက်နှာအသားရည်ကို အက်စစ်ဓာတ်သဘောအရ စားပစ်လိုက်လို့စသုံးသုံးပီး ၁ လ ၂ လလောက်ထိ မျက်နှာက […]
ကလေးနဲ့ဖုန်း ကိစ္စ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ ဆိုတဲ့ မိဘများအတွက်
ကလေးနဲ့ဖုန်း ကိစ္စ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ ဆိုတဲ့ မိဘများအတွက် ရှုပ်ထွေးများပြားလှတဲ့မိဘတွေရဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေကြားမှာ အခုခေတ်အသစ်တိုးလာတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုကတော့ ကလေးနဲ့ဖုန်း ကိစ္စပါဘဲဒီကိစ္စကိုင်တွယ်ရတာလည်း အလွန်ခက်ပါတယ် ခေတ်ကလည်း တကယ့်နည်းပညာခေတ်ကြီးဆိုတော့ ကလေးတွေကို စမတ်ဖုန်းနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ပေးသင့်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမယ့် ဒီဖုန်းကြောင့် စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်း ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတွေထိခိုက်မှာလဲစိုးရတော့ မေမေ ဖေဖေတို့အနေနဲ့ အတော်လေးကို အခက်တွေ့မှာပေါ့ ဒါကြောင့်မို့ ဘေဘီစတားက ခုတစ်ခေါက် မေမေတို့သိချင်နေတဲ့ ကလေး နဲ့ ဖုန်းပြဿနာလေးတွေကိုသေချာချရေးပြီးတော့ ဖြေသွားပေးပါမယ်ကလေးတွေကိုဘယ်အရွယ်မှာဘယ်လောက်အချိန်ပေးပြီး ဖုန်းကြည့်ခွင့်ပေးရမလဲ ဒါလေးက ပထမဆုံးသိသင့်တဲ့အချက်ပါ အရေးလည်းကြီးတာမို့ […]
တင်းတိပ်၊ ဝက်ခြံ၊ မှဲ့ခြောက်တွေကို အရှင်းပျောက်ကင်းသွားစေမယ့် ကြက်သွန်နီ
တင်းတိပ်၊ ဝက်ခြံ၊ မှဲ့ခြောက်တွေကို အရှင်းပျောက်ကင်းသွားစေမယ့် ကြက်သွန်နီ ကြက်သွန်နီက ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုတယ် အလှအပအတွက် ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာကို စာဖတ်သူ သိပြီးနေလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ကြက်သွန်နီကို ရက်ပေါင်း ၄၀ (၁ လကျော်) အသုံးပြုပေးလိုက်ရုံနဲ့ မျက်နှာပေါ်က မလိုအပ်တဲ့ တင်းတိတ်၊ ဝက်ခြံနဲ့ မှဲ့တွေကို ပျောက်ကင်းသွားစေမှာပါ။ တင်းတိတ် မျက်နှာပေါ်မှာ တင်းတိတ်များနေတဲ့ သူတွေအတွက် ကြက်သွန်နီက ကုစားပေးနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ ကြက်သွန်နီအရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း […]
နံ့သာဖြူ၊ နံ့သာနီ၊ ကရမက်၊ တောင်နံကတိုး နဲ့ တောင်နံကြီးတို့ရဲ့ ကောင်းကျိုးများ
နံ့သာဖြူ၊ နံ့သာနီ၊ ကရမက်၊ တောင်နံကတိုး နဲ့ တောင်နံကြီးတို့ရဲ့ ကောင်းကျိုးများ နံ့သာဖြူ၊ နံ့သာနီ၊ ကရမက်၊ တောင်နံကတိုး နဲ့ တောင်နံကြီးတို့ရဲ့ ကောင်းကျိုးများ.. နံ့သာဖြူရဲ့ ကောင်းကျိုးများ နံ့သာဖြူ ဟာ အနွေးဓာတ်ရှိပြီး အပူကိုလည်း နိုင်တယ်။ နှာပိတ်၊ နှာစေး၊ နှာရည်ယိုခြင်းတွေဖြစ်ရင် နှာခေါင်းရိုးတစ်လျှောက် နံ့သာဖြူ လိမ်းပေးထားရင် သက်သာစေပါတယ်။ ထိပ်ကပ်နာ သမားများ၊ နှလုံးတုန် မူးဝေတတ်တဲ့သူများ နှလုံးအားနည်းတဲ့သူများ အတွက် ဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက် […]
မိမိ ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ကို စစ်ဖို့ မပျင်းပါနဲ့
မိမိ ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ကို စစ်ဖို့ မပျင်းပါနဲ့ Acc စစ်ဖို့မပျင်းပါနဲ့ Gg လို့ မန့်ထဲမှာ ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါ.ကိုယ့် Acc ကိုမကြာခနစစ်ဆေးပါ.. ကိုယ့် Fri တွေကိုအမြဲလေ့လာပါ..တင်တဲ့ပို့စ်တွေကိုကြည့်ပါ..ဘုရားပုံတင်ထားတယ်ဆိုပြီး ယုံကြည်စွာ လက်မခံသင့်ပါ.. ဘုရားပုံတော်တွေတင်.ပြီးယုတ်ညံ့တဲ့လူတွေရှိတယ်စာပေမြတ်နိုးသူဆိုပြီးယုံကြည်စွာစိတ်ချလို့မရဘူး..ကဗျာစာပေကို ဗန်းပြပြီးအောက်တန်းကျတဲ့လူ တွေရှိတယ်.. Acc လက်ခံစဉ်ကာလကရိုးရိုးသားသားလေးစားစရာ လက်ခံပြီး သိပ်မကြာဘူးယုတ်ညံ့တဲ့ Acc ဖြစ် သွားတာ တွေရှိတယ်..သတိလဲထားရမယ် အသိလည်းပွားရမယ် မကြာခနလဲ စစ်ရမယ်..Fb လောကရဲ့ တောချောက်မှု့အန္တရယ်တွေ ရှိတယ်…Acc စစ်ဖို့ […]
လည်ချောင်းနာ လျှင် ဖြေရှင်းနည်းလေးများ
လည်ချောင်းနာ လျှင် ဖြေရှင်းနည်းလေးများ အာသီးရောင်(Tonsi..llitis) ပြီး လည်ချောင်းနာသည့်သူများအတွက် အာသီးရောင်ပြီး လည်ချောင်းနာသူများအတွက် သက်သာပျောက်ကင်းစေသည့် သဘာဝ ဆေးနည်းများ ပူပြင်းတဲ့ ရာသီမှာ ရေများများ သောက်ပါ – ဝမ်း မချုပ်ပါစေနင့်. – အသီးအနှံ များများ စားပါ ။အာသီး ရောင်သည့် လက္ခဏာတွေက အစာစားမြိုချပါက လည်ချာင်းအတွင်း နာကျင်စေပါတယ်။ဒီလို ခံစားနေရပြီဆိုရင် ၁ – ရေနွေးဖြူ ထဲကို အိမ်သုံးဆား ၁ […]
ဆင္းရဲေလ ေအာက္ေရာက္ေလ ျပန္တက္ရခက္ေလ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရးနဲ႔ ျမန္မာျပည္ အနာဂတ္
ဆင်းရဲလေ အောက်ရောက်လေ ပြန်တက်ရခက်လေ တိုင်းပြည် စီးပွားရေးနဲ့ မြန်မာပြည် အနာဂတ် ဆင်းရဲလေ အောက်ရောက်လေ ပြန်တက်ရခက်လေ တိုင်းပြည် စီးပွားရေးနဲ့ မြန်မာပြည် အနာဂတ်.. ရေ ရဲ့ဖိအား ဆိုတာ အောက်ရောက်လေ ဖိအားကြီးလေ ပိုမြုပ်လေပဲ။ စုံ့စုံ့မြုပ်တယ် ဆိုတာ အဲ့ဒါကိုခေါ်တာပေါ့။ စီးပွားရေးဟာလည်း ဆင်းရဲလေ အောက်ရောက်လေ ပြန်တက်ရခက်လေပါပဲ။ အာဖရိကဆို တတိုက်လုံး ရာစုနှစ်ချီ နလံမထူဘူး။ လက်ရှိ နိုင်ငံရဲ့ ငွေကြေး မတည်ငြိမ်ဘူး၊ […]
လူသိနည်းပြီး သတိမမူကြတဲ့ တံမြက်စည်းနိမိတ်များ
လူသိနည်းပြီး သတိမမူကြတဲ့ တံမြက်စည်းနိမိတ်များ ၁။ အပျိုတွေ တံမြက်စည်း ကျော်မိရင် အိမ်ထောင်မကျခင် ဗိုက်ကြီးတတ်ပါတယ်။ ၂။ အပျို၊ လူပျိုတွေ ခြေဖျား‌ပေါ်ကျော်ပြီး တံမြက်စည်း ခတ်မိရင် အဲ့ကလေးတွေ အိမ်ထောင်မကျတော့ပါဘူး။ တံမြက်စည်းကို တံတွေးနဲ့ ပြန်ထွေးခိုင်းပါ။ ၃။ အိမ်နီး ခြံနီးချင်းတွေ ကိုယ့် အိမ်/ခြံဝကစပြီး တံမြက်စည်း လာလှည်းသွားရင် ဝင်မယ့်လာဘ် မဝင်တော့ပါဘူး။ သူ့အိမ်‌ဝက ပြန်လိုက်လှည်းယူပါ။ ၄။ တံမြက်စည်းသစ်နဲ့ အိမ်ထဲက အိမ်ပြင် […]